Metal bookends ပေးသွင်းသူများနှင့် စက်ရုံ - China Metal bookends ထုတ်လုပ်သူများ
ပစ္စည်း: အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိ။သတ္တုဖြင့်တည်ဆောက်ထားသမျှ အလှဆင်စာအုပ်သည် ကြီးမားလေးလံသော စာအုပ်များကို ကိုင်ဆောင်ရန် ကြာရှည်ခံကာ တာရှည်ခံစေသည်။အမှုန့်ဖြင့်အုပ်ထားသော မျက်နှာပြင်သည် ချောမွေ့ပြီး သံချေးတက်စေသည်။
ရရှိနိုင်သောအရောင်များ- အနက်၊ အဖြူ၊ ပန်းရောင်၊ အပြာ၊ အဝါရောင် စသည်တို့ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော တာရှည်ခံအမှုန့်များ။
အရွယ်အစား 6" L x5x D x 6.7" H သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားများ.
အသုံးပြုမှု- စာအုပ်စုစည်းမှု၊ သင်ကိုယ်တိုင် သို့မဟုတ် စာအုပ်ပိုးကောင်များအတွက် လက်ဆောင်ကောင်း။
ပရီမီယံအငြိမ်ဆေးသုတ်ခြင်းနှင့် အဝိုင်းအနားများ- အရည်အသွေးမြင့် ဆေးသုတ်မျက်နှာပြင်နှင့် အဝိုင်းအစွန်းများသည် အလွန်ချောမွတ်ပြီး အပြားလိုက်အစွန်းများ သင့်စင်များ သို့မဟုတ် စာအုပ်များကို ခြစ်ရာများ သို့မဟုတ် ခြစ်ရာများမရရှိစေရန် သေချာစေသည်။
အလှဆင် BIRD သတ္တုစာအုပ်များ
ပစ္စည်း: အရည်အသွေးမြင့် သံမဏိ၊ ခိုင်ခံ့သော၊ အောက်ခြေတွင် စလစ်ကပ်သည့် ပတ်ပြားများ ပါရှိသည်။
အရွယ်အစား- 5" L x5x D x 7" H. သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အပြီးသတ်ခြင်း- အနက်ရောင်၊ အဖြူရောင်၊ ပန်းရောင်၊ အပြာ၊ အဝါရောင် စသည်တို့ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော ကြာရှည်ခံအမှုန့်။
ပက်ကေ့ချ်: 1set/box၊24sets/carton.စိတ်ကြိုက်လက်ဆောင်သေတ္တာအထုပ်ကို လက်ခံပါ။
အသုံးပြုမှု- စာအုပ်များ၊ CD စသည်တို့ကို ကိုင်ဆောင်ရန် အလွန်ကောင်းမွန်သော ဒီဇိုင်း။
OEM & ODM ဒီဇိုင်းများကို ကြိုဆိုပါသည်။ 15 နှစ်ကျော် အတွေ့အကြုံများနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့များသည် စာရွက်သတ္တုအလှဆင်ပစ္စည်းများ အမျိုးအစားအားလုံးအတွက် အပြည့်အဝဖြေရှင်းချက်ပေးပါမည်။
အရွယ်အစား- 4.7" L x 3.7 x D x 6" H. သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်။
Floating Metal စာအုပ်စင်
ဒီဇိုင်း- မမြင်နိုင်သော နံရံတွင် ရေပေါ်စာအုပ်စင်များ တပ်ဆင်ထားသည်။
အရွယ်အစား- 5" L x 6" D x 2.5" H. လေးလံသောစတီးလ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး အလွန်ခိုင်ခံ့ပြီး 10kgs+ ကိုင်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
ပြီးမြောက်မှု- အနက်ရောင်၊ အဖြူရောင်၊ အပြာ၊ ပန်းရောင်၊ မီးခိုးရောင် စသည်ဖြင့် အမှုန့်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။
Package: 2pcs / 3pcs / 4pcs တစ်ဗူးတွင် set တစ်ခုအဖြစ်။ လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်.
အသုံးပြုပုံ- စာအုပ်များကို နံရံတွင် ကိုင်ထားပါ။
ဒီဇိုင်း- Classic TREE bookends ဒီဇိုင်း။ ခိုင်ခံ့သော အလှဆင်ပစ္စည်းများဖြင့်။
အရွယ်အစား- 4.7" L x 3.7 x D x 7" H။
ပြီးမြောက်မှု- အနက်ရောင် အမှုန့်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။
သော့ချိတ်များ, သတ္တုနံရံအနုပညာ, Necklace Holder Display, Plant Pot Hangers များ၊, နံရံမှာ မိုးပျံအပင်ကွင်း, သော့ချိတ် စီစဉ်သူ,